Sidan ayey u shaqeyn doontaa aaladda Apple iyo muraayadaha indhaha | Wararka IPhone
Sidan ayaa barta Apple iyo muraayadaha u shaqeyn doonaan
Waxay noqon kartaa wax lala yaabo soo-jeedinta soo socota ee bisha Sebtember 10. Waxaan u qaadaneynaa inaan si fudud u arki doonno iphone-ka cusub iyo jiilka cusub ee Apple Watch oo aan laheyn war weyn marka laga reebo agabyada cusub sida Titanium iyo Ceramics. Laakiin maalmihii u dambeeyay warar cusub ayaa lagu soo daray laba shey oo cusub: aalad raadiyaha iyo muraayadaha dhabta ah ee Apple.
Goobta (Apple Tag?) Waxaa loo isticmaali doonaa in lagu dhejiyo shay kasta oo ay u badan tahay inuu lumayo (boorsada dhabarka, furayaasha, boorsada, cunug?) Oo awood u yeelan doonta in la helo wakhti kasta. Muraayadaha Xaqiiqda ee Dareemay waxay noqon kartaa waxqabadka sanadka ugu weyn. Sidee alaabooyinkani u shaqeyn lahaayeen? Waxaan hoos ku aragnaa.
1 Qalabayn khadka toosan oo qumman
2 Muraayadaha Xaqiiqada ah ee Dareemay
Qalabayn khadka toosan oo qumman
Qalabka wuxuu noqon karaa wax soo saar aad u la mid ah kuwa ay Tile horey u soo bandhigtay. Qalab yar oo wareegsan oo cadcad oo calaamadda Apple ku dhex taal bartamaha, oo leh isku xirnaanta NFC iyo Bluetooth LE, nooc ka mid ah baytariga ama batteriga, sameecad si uu awood ugu yeesho in uu soo saaro dhawaaqa sidaasna uu ku helo marka aan isku soo dhowaanno, iyo hoos u dhac ku yimi macruufka gudaha si uu u shaqeeyo.
Laakiin waxa ugu yaabka badan ayaa noqon doona sida ay u shaqeyso. Qalabkan yar ayaa lagu dhejin karaa walax kasta iyo Waxaa laga heli karaa meel kasta, iyada oo aan lahayn isku xirnaanta internetka laftiisa. Sidee yeeli doonaa? Sidii aan u sharaxnay maalin dhaweyd in goobta IPhone ay shaqeyso markii aysan lahayn wax caymis ah iOS 13.
Sida loo raadiyo iPhone-gaaga, iPad-ka ama Mac-kaaga xitaa adiga oo aan lahayn xiriir internet
Waxay ku xirmi doontaa iyada oo loo marayo Bluetooth qalab kasta oo Apple ah oo u dhow, qof kasta oo ag mara, aaladdaasina waxay noqon doontaa tan bixisa qadka internetkeeda si aad uga heli kartid meel kasta oo adduunka ka mid ah, meel kastoo aad ka fog tahay . Waxaas oo dhan waxaad ku sameyn kartaa barnaamijka "Raadinta" ee la imaan doona macruufka 13. Waxaa jiri doona tab cusub, "Items" (maqaalo) halkaas oo aad ku arki karto dhammaan alaabtii aad ku calaamadeysay astaamahan.
Ku xirmidda degganeyaashaas koontadaada iCloud waxay u sahlanaan doontaa sida isku-darka AirPods ama HomePod, oo moobiilkaga u dhowaanaya. Tilmaamahan, qof kasta oo hela wuxuu ku arki doonaa farriin shaashaddiisa oo leh magaca milkiilaha iyo macluumaadka xiriirka. Haddii tilmaamuhu uu ku jiro qaab lumay, tilmaamani muhiim ma aha, tan iyo marka qof alaabta Apple haysta uu ag joogo waxay heli doonaan fariin ka digaya badeecada luntay iyo muujinta faahfaahinta xiriirka.
Tan kaliya maahan, Waxaan sidoo kale arki karnaa degmooyinkeenna oo isticmaalaya Xaqiiqada Dareenka, kamaradda iphone-keena, wax dabcan sidoo kale lagu heli karo muraayadaha Apple, oo aan sidoo kale ku arki karnay bandhiggan oo aan hadda faahfaahin doonno.
Muraayadaha Xaqiiqada ah ee Dareemay
Apple sidoo kale waxay soo bandhigi kartaa muraayadaha indhaha ee AR, in kasta oo ay tahay wax ay wali su'aalo ka qabaan dadka badankood ee xiriirka dhaw la leh shirkada. Xitaa waxaa jiray hadal heyn aalad la mid ah muraayadaha caadiga ah ee Xaqiiqada Virtual in aan hore u ogaanay. Waxaa laga yaabaa in habka ugu horreeya ee Apple ee xaqiiqda loo yaqaan 'Augmented Reality' ay la socoto qalab lagu isticmaalo qalab sida iPhone-ka iyo kamaraddeeda saddex-geesoodka ah. Ma jiraan wax cad oo ku saabsan.
Waxa laga ogyahay tijaabooyinka gudaha ee ay Apple waday, waa taas waxaa jiri doona codsiyo loo diyaariyey "Stereo AR" (Xaqiiqda Stereo Augmented Reality) taasna waxay ku shaqeyn kartaa laba nooc oo kala duwan: Marka aan qalabka ku haysano gacanta (iPhone) iyo markaan wajiga saarnay iyadoo gacan laga helayo qalab kale. Qaar ka mid ah codsiyada horey loogu sii diyaariyay Stereo AR waa Khariidado, Raadin iyo mid cusub oo loo yaqaan 'Quicklook AR' oo la shaqeyn doona waxyaabaha ku jira webka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Sidan ayaa barta Apple iyo muraayadaha u shaqeyn doonaan
Fikradda goobtu waxay ila tahay aniga mid weyn laakiin…. Maxay tahay sababta adeegsade kasta oo ka tirsan shirkadda Apple uu qalabkiisa uga tagayo albaab ahaan dariiq waajib ah oo aan lacag laga qaadin Apple si ay u bixiso adeeg ay lacag ku samayn doonaan?
Ma lacag ayey naga siin doonaan isku xirka xogta iyo helitaanka iyo isticmaalka aaladdayada?
Milkiilayaasha aaladda ma joojin karaan shaqadan?
Waan ku celceliyaa. Fikraddu aad ayey u wanaagsan tahay laakiin uma maleynayo inay sax tahay inay rabaan inay lacag ku helaan iyagoo isticmaalaya iPhone-kayga iyo isku xirka xogtayda ee euro-kaygu iiga baxay.
Hadda ... wax walba waa laga wada xaajoon karaa ... inay ii oggolaadaan inaan isticmaalo adeegyadooda lacag bixinta midkoodna loogu beddelo adeegyadayda. Kaydinta dheeriga ah ee loogu talagalay icloud, muusikada tufaaxa ...
Qalabkaagu had iyo jeer wuu is oggol yahay oo wuxuu u dirayaa goobta Apple, markaa wuu xafidaa markaad baabuurkaaga dhigato, ama wuxuu ku siinayaa talooyin ku saleysan goobtaada, ama wuxuu shidaa nalka markaad guriga timaaddo haddii aad HomeKit ku haysato xulashadaas. Kuguma laaban doonto wax kharash dheeraad ah adiga. Waxaan u maleynayaa inay jiri doonto ikhtiyaar aad ku joojiso haddii aad rabto, si la mid ah sida aad hadda gab karto.
Apple waxay i siisaa adeegga helitaanka aaladayda waa wax laga yaabo ama aan xiiseyneynin.
Hadda, Apple waxay rabtaa inay adeegsato aaladdayda iyo isku xirka xogteyda si aan u ogaado aaladaha dhinac saddexaad iyada oo aan ogolaansho laga haysan waa waxa aanan fahmin.
Apple iima siiso keydka dheeriga ah ee aan ku bixiyo icloud ama tufaaxa muusikada. Maxaan kuugu siinayaa isticmaalka qalabkeyga bilaash?
Maya, Kaarka Apple ma aha oo kaliya titanium, Jony Ive wuxuu ka tagay shaambadiisii ​​aluminium
Magacyada rasmiga ah ee iPhone 11 iyo iPad cusub ayaa soo ifbaxay